Sidee ayay u dhacday xafladii Liveroool, Rikoorradii ay sameysay xili ciyaareedkaan? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Sidee ayay u dhacday xafladii Liveroool, Rikoorradii ay sameysay xili ciyaareedkaan?
Kabtanka Liverpool Jordan Henderson ayaa kor u qaaday koobka Premier League-ga isagoo kusugan Anfield si uu u weyneeyo guushii ugu horeysay ee kooxda muddo 30 sano ah ka gaarto horyaalka.
Henderson wuxuu koobkan ka helay halyeeyga Reds Sir Kenny Dalglish, kaasoo ahaa tababaraha kooxda markii ugu dambeysay oo ay ku guuleysataaan horyaalka 1990,
iIntii lagu guda jiray xaflad cajiib ah oo ka dhacday Anfied waxaa lasoo bandhigay waxyaabo layaab lahaa ka dib markii kooxda heysata horyaalka ay ku garaacday Chelsea 5-3.
Liverpool ayaa loo xaqiijiyey inay tahay horyaalka England 25kii Juun iyada oo 7 kulan uu ka harsanaa xili ciyaareedka, markii kooxda ku soo xigta ee Manchester City ay guuldarro ka soo gaartay Chelsea, laakiin waxay ahayd inay sugaan ilaa kulankooda ugu dambeeya ee xilli ciyaareedka ay ku ciyarayaan garoonkooda si loo gudoonsiiyo koobka.
Waxay ku sameeyeen dabaaldag weyn garoonkooda, inkastoo taageerayaal aysan ka qeyb galin bandhigga koobka haddana guryahooda ayay ka daawanayeen.
Waxaan sugeynay waqti dheer, ayuu yiri Henderson, kaasoo ka soo kabtay dhaawac jilibka ah.
Dabaaldagii halkaas ka dhacay wuxuu ahaa wax la yaab leh, wiilashu way istaahileen waqtigaan oo kale inay helaan waana ku mahadsan yihiin qoysasku naga daawanayay guryahooda ayuu yiri Klopp.
“Inaan taalo sidii taa oo kale sameynaa runtii waa mid qaas ah.”
Ma jirin wax taageerayaal ah oo ku sugnaa garoonkooda Anfield oo qaada 53,000-kun ka dib markii xilli ciyaareedkii Premier League uu dib u bilaabay 17kii Juun la amray in albaabada loo xiro garoomada sababo la xiriirta cudurka faafa ee coronavirus.
Boliiska Merseyside ayaa uga digay taageerayaasha inaysan booqan kulamada ka dhacaya garoonka Livererpool ka dib guushii ay kooxda ka gaartay Premier League-
Kooxo yar oo taageerayaal ah oo watay calanka cas ee kooxda, ayaa salaamay macalinka kooxda intii aysan ciyaarta bilaaban, waxaana rasaas been abuur ah laga riday banaanka garoonka Anfield intii ay ciyaarta socotay.
Intii ay ciyaartu socotay, Booliska Merseyside waxay ku dhawaaqeen inay meel marinayaan amar kazoo baxay dowlada UK ee la xiriirta irnaanshaha garoomada kubadda cagta.
Dalglish, oo dhaliyay 172 gool 515 kulan oo uu u saftay Liverpool intii u dhaxeysay 1977 iyo 1990, ayaa billado la helay intii lagu guda jiray xaflada.
Klopp iyo ciyaartoydiisa ayaa ku heesay heesta caanka ah ee kooxda Waligaa kaligaa ma socan kartit ka hor inta aan la gudoonsiin koobka.
Markii la weydiiyay hadii uu fariin u yahay taageerayaasha, Klopp wuxuu yiri: “Haddii aadan u arkin inaan kuu qabanayno howshaada, kuma caawin karo. Waxaa muhiim ah in aan anaga matali karno qof kasta oo jacel kooxdaan.
“Waxaad naga farxiseen dhamaanteen waa inaan guriga ku dabaaldegnaa sida nala amray. U diyaar garoowga xaflad weyn markii fayraskaan dhamaado waa qasab inaan siinaa taageerayaasheena.
Kadib 30 sano oo ay seegayeen tartankaan, maalmo mugdi ah iyo xitaa mid meel dhaxaad ah, Liverpool ayaa ugu dambeyntii soo gabagabeysay rajadii dheerayd ee kooxda ay ka qabtay inay mar uun noqdaan horyaalnimada England markii 19aad.
Waxay bilaabatay rajadooda 9 Ogosto 2019 markii ay 4-1 ku garaaceen Norwich ciyaartii furitaanka xilli ciyaareedkii 2019-20 Premier League.
Natiijadaas ayaa gogol dhig looga dhigay wixii dhacay xalay.
Ka dib markii ay hal dhibic ka dambeeyeen kooxda Manchester City xilli ciyaareedkii 2018-19, Reds ayaa xasilloonu muujisay, iyagoo guuleystay sideedii kulan ee ugu horreysay horyaalka xili ciyaareedkaan.
In kasta oo ay u safreen Qatar si ay uga qeyb galaan Koobka kooxaha Aduunka bishii Diseembar, waxay ku dhameysteen 2019 iyagoo 13-dhibcood hogaanka ku haya.
Dhibcaha ayaa gaaray 25 dhibcood markii Premier League la joojinayay bishii Marso sababo la xiriray Covid-19.
Klopp ayaa markii dambe qirtay inuu ‘ka walwalay’ in xilli ciyaareedka lagu dhawaaqo inuu yahay waxba kama jiraan inta lagu jiray xiritaanka ciyaaraha.
Markii ay soo baxday in dib loo bilaabo ciyaaraha, Liverpool oo laheyd 82 dhibcood 29 kulan oo ay ciyaareen markii kubada cagta la joojinayay waxay kaga filnaatay in ay ku guuleysato horyaalka.
Manchester City, oo heysatay damaanad qaad ah inay ku dhameysan karto kaalinta labaad, kaliya waxay gaari kartay 81.
Guushii ay xalayi ka gaareen Chelsea waxay la micno tahay in Liverpool ay leedahay 96 dhibcood – waxayna 18 ka sareeyaan City xili kaliya kulanka Newcastle uu u harsan yahay.
1dii Maajo 1990, Ciyaartoyda Liverpool waxay soo bandhigeen koobka horyaalnimada si xamasad leh iyagoo kusugan Anfield.
Waxay ahayd markii ugu dambeysay oo ay u dabaaldegaan guul sidan oo kale ah muddo 30 sano ah kadib.
Dabaaldegii xalay ayaa yimid ka dib markii kooxda Klopp ay xilli ciyaareedkan ku qarash gareeyeen dadaalo bada.
Hal mar Reds in ay hogaanka ku qabatay 25-dhibic waxay aheyd tii ugu weyneyd taariikhda abid koox horyaalka Ingiriisiga Hogan ku qabato.
Markii ay horyaalka sheegteen 7 kulan oo u harsan, Liverpool waxaay garaacday rikoorkii Manchester United ee 2000-01 iyo Manchester City xilli ciyaareedkii 2017-18, kuwaasoo labadoodaba noqday horyaal iyadoo shan kulan ay harsan tahay.
Markii Liverpool ay gaartay 61 dhibcood 21 kulan oo ay ciyaareen, waxa ay aheyd kooxdii ugu badneyd ee abid dhibcahaas uruursata shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Sikastaba, waxaa jira hal rikoor oo kooxda Klopp ay seegtay.
Rikoorka Manchester City ee ah 100 dhibcood hal xilli ciyaareed ayay gaari waayeen, iyagoo kaliya hatan awod u leh in ay helaan 99.
Taageerayaasha Liverpool oo Isugu soo baxay banaanka Anfield si ay ugu dabaaldegaan Horyaalka Premier League & Mucjisooyinka.
Previous articleMaxkamadeynta Wariye Gurbiya oo Maanta la soo geba-gabeeyay
Next articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 23-07-2020
Faah faahin laga bixiyay dil Sarkaal ka tirsan CIA-da Mareykanka loogu geystay Somalia
Sacuudiga iyo Qatar oo ku dhow inay heshiis gaaraan
Joe Biden oo la kulmay dadka uu saameeyay Coronavirus
Itoobiya: Duqeyn lala beegsaday Warshad uu Shiinaha maalgeliyay
Sacuudiga oo iska fogeeyey dilka Mohsen Fakhrizadeh